Tonya Allen markii ay joogtay dood miiska wareega ah oo ay martigelisay Energy Sec. Jennifer Granholm oo ku saabsan baahida loo qabo kala-guurka tamarta nadiifka ah. Xuquuqda sawirka: Molly Miles
Anigoo Milicsanaya Sannadkaygii Kowaad Ee Aasaaska
Bishan Maarso, waxaan calaamadeeyay sanad adeega McKnight Foundation. Waxaan imid Mu'asasada wakhti go'an oo waqti ah - waqti degdeg ah. Waxay ahayd badhtamihii masiibada, oo ku sii jeeday maxkamaddii dilka George Floyd, lix toddobaad ka hor dilkii macno darada ah ee Daunte Wright - iyo iyada oo ay jirto masiibooyinka cimilada aan hore loo arag ee waddanka oo dhan. Murugada waayo aragnimadaas ka timi may tegin, run ahaantiina, dhaawacyada qaar ayaa sii kordhay.
Sida aan si quus ah u raadineyno fursado soo ifbax, Waxaan isku aragnaa in aan dhex soconno dhowr qof oo isku mar ah, cimilada, iyo amniga adduunka xaaladaha degdega ah. Dagaalka Ukraine wuu ina wada saameeyaa. Durba, falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in hakad la geliyay dhoofinta badarka ee gobolka laga yaabo in ay uga sii dari karto cunno yarida meelaha nugul. Intaa waxaa dheer, yaraanta degdega ah ee saliiddu waxay keenaysaa dareenka ku tiirsanaanta taariikhiga ah ee shidaalka fosil iyo baahida degdegga ah ee lagu dardargelinayo xalalka tamarta nadiifka ah. Waxaa intaa dheer, isbeddelka dhaqaale iyo sicir-bararka ayaa khatar ku ah inay ka dhigaan guryo badbaado leh, tamarta, iyo baahiyaha kale ee ay ku adag tahay qoysaska halganka ku jira inay awoodaan. Iyo sida kalitalisnimadu ku soo qulqulayso adduunka oo dhan, degdegga ah ee dadaallada xakamaynta codbixiyayaasha ee dawladeed ayaa khatar gelinaya dimuqraadiyadeena jilicsan.
U Gudbida Ka Gudub Deeq Samaynta Si Buuxda Loogu Qabto Isbedel Samaynta
Go'aamo ku samaynta McKnight ee ka dhanka ah dulucdan ayaa ii muujisay, xitaa in ka badan, baahida loo qabo in la dhaqaajiyo oo dib loo qeexo Aasaaska si aan ula kulano caqabadaha gaarka ah ee jiilkeena. Sannadkan ina dhaafay, waxaanu sahminaynay sidii looga guuri lahaa aqoonsiga soo jireenka ah ee samafale, kaas oo loogu talagalay in si gaar ah loogu qoro jeegaga ururada aan faa'iido doonka ahayn—ugu horayn deeq bixiye-ka ballaadhan, ka geesisan, iyo aqoonsiga casriga ah ee a beddele. Shaki kuma jiro, waxaan had iyo jeer u adeegi doonaa sidii deeq-bixiye dadaal iyo istiraatijiyadeed. Dhab ahaantii, waxaanu balaadhinnay miisaaniyad sanadeedka deeq-bixinta ilaa $120 milyan-in ka badan 20% ayaa kordhay sannadkii hore-waxana aanu dib u cusboonaysiinaynaa habab deeq-bixineed oo dhowr barnaamij ah si aan u xareyno una soo saarno sinnaanta.
"Sannadkii ina dhaafey, waxaan sahamineynay sida looga guuro aqoonsiga soo jireenka ah ee samafale-ka ugu horrayn deeq-bixiye- una gudubno aqoonsiga ballaaran, ka geesisan, iyo aqoonsiga casriga ah ee beddelka."
Waxaan muddo dheer rumaysnayn inaan fulin karno doorar kala duwan - oo ay ku jiraan maalgeliyaha hay'adaha, soo-jeediyaha, loo-shaqeeyaha, hoggaamiyaha fikirka, iyo tan ugu muhiimsan, lammaanaha dhow. Waxaan go'aansanay inaan si adag ugu tiirsanaano doorarkan wax-ka-beddelka ah si aan u hormarno hadafkeena iyo hadafyadayada.
Anaga, isbedel samayntu waa ka badan tahay fikirka. Waxa ay la macno tahay samaynta ula kac ah, tallaabo hal abuur leh, oo ay la socdaan shuraakadayada, si ay u xaliyaan qaar ka mid ah arrimaha ugu weyn maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee waqtigeena. Waxay la macno tahay in la daad gureeyo nooc kasta oo raasumaal ah oo aan haysano-dhaqaale, dadnimo, sumcad, caqli, saamiley — si loo helo halabuur iyo saameyn. Waxayna ka dhigan tahay in aan xaqiijino hoggaaminteena madaniga ah iyo saamaynta ay ku yeelanayaan habab istiraatiiji ah oo muuqda.
Waa kuwan dhawr tusaale oo ku saabsan shaqadeennii dhawaanahaaneed ee isbeddelka. Sidii lagu dhawaaqay dayrtii hore, waxaan u isticmaaleynaa maalgelinteena si aan u hormarno goolasha eber, waxaanan sii wadeynaa in aan ku biirno hadafkeena oo aan saameyn ku yeelano maalgelinta anshaxa guud ahaan faylalka deeqaha. Intaa waxaa dheer, waxaan isticmaaleynaa doorkayaga ka mid ah isku-dubarid istiraatijiyad ah - abuurista isbahaysi cusub si aan u qiyaasno si ka duwan sida aan dib u dhisi karno xaafadaha iyo ganacsiyada yaryar ee ay saameeyeen Covid-19 iyo kacdoonka shacabka. Waxaan ognahay baaqyada isbeddelka ee habab cusub oo looga fikirayo sida aan u geyno codkeena dadweynaha iyo saameynta. Natiijo ahaan, waxaan tijaabineynaa muruqyo isgaarsiin istaraatiijiyadeed oo cusub si aan u gaarno daawadayaasha wixii ka baxsan kooxdayada caadiga ah iyo kuwa raaxada leh ee taageerayaasha.
PosiGen iyo Mashruuca Footprint waxay daabulayaan tamarta cadceeda Hurricane Ida Dhibanayaasha Louisiana. Shirkadaha sida PosiGen ee ku jira faylalka maalgashiga waxay naga caawiyaan inaan gaarno yoolalka eber ee saafiga ah. credit Photo: Footprint Project
Waxaan ku kobcineynaa dhaqan cusub McKnight waxaana kordhineynaa cabbirka, kala duwanaanta, iyo xirfadaha kooxdeena. Inta lagu jiro isbeddelladan urureed, qaar ka mid ah xubnaha kooxdeena ayaa gudbinaya usha si ay u sameeyaan aragtiyo cusub oo ku saabsan Aasaaska iyagoo raacaya koritaankooda iyo hamigooda hoggaamineed. Waxaan uga mahadcelineynaa adeegga ay u hayaan Hay'adda. Waxaanan ka war qabnaa saamaynta ay isbeddelladani ku leeyihiin shaqadayada iyo xidhiidhka aannu la leenahay lammaanayaasha muhiimka ah ee adiga oo kale ah. Waxaan ku waydiisanaynaa samirkaaga inta aan si buuxda uga gudubnay, waxaanan rabaa in aan kuu xaqiijiyo in aan maanta haysano koox la dhiirigaliyay.
"Waxaan rabnaa in aan raadinno xulafooyin aan suurtagal ahayn si ay isu yimaadaan oo aan u gaarno natiijooyin dhiirran oo midkeen kaligiis gaari karin."
Baahida Loo Qabo Qaabka Teendhada Weyn
Shaqadayada horumarinta xalalka cimilada geesinimada leh iyo sinnaanta jinsiyadda, waxaan ognahay in qof kastaa aanu isku si u arkin arrimahan adag. Waxaan la tacaaleynaa waxa ay qaadaneyso si aan u gaarno hadafkeena marka loo eego xogta khaldan ee baahsan, xeeladaha siyaasadeed ee ula kac ah si loo kiciyo kala qaybsanaan macmal ah, iyo walaaca dadweynaha oo dhan. Inta badan, ma jirto jawaab fudud.
Tan iyo markii aan imid Mu'asasada, waxaan u ololeeyay hab "teendho weyn", oo aan waligeed ku qanacsanahay inaan u baahanahay inaan iftiin u noqono gudcurka dhexdiisa. Gudaha teendhadan, waxaanu rajaynaynaa inaanu helno oo aanu ku darno isbedel-sameyaal matali kara waaxyo kala duwan, juquraafi, ama waaya-aragnimo nololeed. Waxaan u arkaa teendho weyn meel ay dadka mararka qaar is khilaafaan ay isugu yimaadaan, xitaa ay ka gudbaan kala qeybsanaan siyaasadeed, sababtoo ah waa isku dan. xallinta dhibaatooyinka ina saameeya dhammaanteen. Teendhada waxaa ku jira dad leh (1) noocyo kala duwan oo awood ah oo diyaar u ah inay isticmaalaan oo ay wadaagaan, (2) aragtiyo kala duwan kuwaas oo doonaya inay si wadajir ah u qeexaan dhibaatada oo ay la yimaadaan xaqiiqooyin guud oo guud, iyo (3) fikrado kala duwan oo ku saabsan waxa loo baahan yahay si loo xalliyo dhibaatooyinka, iyadoo si adag u go'an tahay xallinta caqabadaha.
Tonya Allen waxay la hadashaa milkiilayaasha ganacsiga yar yar Xarunta Global, St. Cloud cultural mall. Xuquuqda Sawirka: Paul Middlestaedt
Tonya Allen, Ben Passer, iyo Dan Thiede ayaa la kulmay agaasimaha fulinta ee tamarta Fresh Michael Noble. Xuquuqda sawirka: Molly Miles
Nasiib darrose, ma aragno dad ku filan oo dhisanaya teendhooyin waaweyn ama ku biiraya kuwa hadda jira. Bulsho ahaan, aad bay uga sahlan tahay in lagu dhex ugaadhsado bulshooyinka ay isku midka yihiin intii la samayn lahaa shaqada aan raaxada lahayn ee maqalka aragtiyaha adduunka ee aan annaga ahayn. Cilmi baaristu waxay muujinaysaa in badideenna aan waqtigeena la qaadanno dadka innaga oo kale ah - halka aan dooranno inaan ku noolaanno, halka aan ku cibaadeysaneyno, iyo halka aan u dirno carruurtayada dugsiga, kanaalka wararka ee cable-ka aan ka daawano.
McKnight, waxaan rabnaa inaan ka baxno qaabkan fakarka ah iyo u noolaanshaha goonida ah. Waxaan hiigsaneynaa inaan si adag u shaqeyno si aan u wada gaarno xalalka. In kasta oo aysan ahayn xabbad qalin ah, waxaan u aragnaa fikirka teendho-weyn inuu yahay qalab ku jira qalabkayaga oo aan u diri karno si joogto ah oo awood leh. Waxaan rabnaa in aan raadinno xulafooyin aan suurtagal ahayn in ay isu yimaadaan oo ay gaaraan natiijooyin dhiirran oo midkeen kaligiis gaari karin.
Markaan fiiriyo sanadaha soo socda, waxaan sii wadi doonaa inaan si garab ah ula shaqeeyo madaxda gobolkan ee u heellan - guud ahaan waaxyaha guud, kuwa gaarka ah, iyo kuwa madax-bannaan - si aan wada jir uga dhisno teendhooyin waaweyn oo aan dadka ugu yeedho inay nagu soo biiraan. Waa sida kaliya ee aan awood ugu yeelan karno inaan abuurno mustaqbal waara, oo xaq ah Minnesota iyo wixii ka dambeeya, oo aan hubinno in qof kastaa uu horumari karo.
McKnight, waxa aanu samaynayna intii karaankeena ah, sida ugu dhakhsaha badan ee aan awoodno. Waxaan isku dheellitirnaa degdeggaas iyo go'aan qoto dheer oo fog oo bulshooyinkeenna ah - inaan maanta ka shaqeyno isbeddel isbeddel ah oo si wanaagsan uga baxsan nolosheenna. Waxaa sharaf ii ah inaan ka mid noqdo shaqadan dheer ee aan isleenahay waxay sameyn doontaa saameyn jiilka ah.